I-Spencer Lane Cottages Granny 's Ensuite Room - I-Airbnb
I-Spencer Lane Cottages Granny 's Ensuite Room
Broadwater, Queensland, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Scott
Phumula endaweni enokuthula yeZwe Lokuhlala, enhliziyweni yendlu esebenza kahle engamakhilomitha angu-8 kuphela entshonalanga yeStanthorpe, Qld
Ama-Spencer Cottages ayipharadesi lami futhi sikunikeza i-Granny 's Ensuite Room.
Ikamelo lika-Granny' s Ensuite liqukethe umbhede omkhulu, indlu yokugezela, i-TV, isiphephethamoya esisesilingini kanye ne-heater, ifriji elikhulu, iketela, itiye nekhofi kanye nezindawo zokupheka ezigcwele. Ngaphandle kunendawo yokuhlala enezindawo ezinhle ezizungezile.
I-Spencer Cottages iyingxenye yami yepharadesi futhi sikunikeza i-Granny 's Ensuite Room.
Vakashela iwebhusayithi yethu ukuze ubone okwengeziwe:
www.spencerlanecottages.com.au Ikamelo lika-Granny 's Ensuite liqukethe umbhede omkhulu, indlu yokugezela, i-TV, isiphephethamoya esisesilingini kanye ne-heater, ifriji elikhulu, iketela, itiye nekhofi kanye nezindawo zokupheka ezigcwele. Ngaphandle kunendawo yokuhlala enezindawo ezinhle ezizungezile.
Sinikeza indawo emaphakathi kakhulu nakho konke okunikezwa yiSifunda esidumile.
Ngaphansi nje komgwaqo uzothola i-Wineries yokuwina kanye ne-Famous belt Brewery noma uhambe ehlathini uhamba e-Girraween National Park bese ugibela ama-Pyramids.
Ikamelo lika-Granny 's Ensuite liqukethe umbhede omkhulu, indlu yokugezela, i-TV, isiphephethamoya esisesilingini kanye ne-heater, ifriji elikhulu, iketela, itiye nekhofi kanye nezindawo zokupheka ezigcwele. Ngaphandle kunendawo yokuhlala enezindawo ezinhle ezizungezile.
I-Spencer Cottages iyingxenye y…
Hlola ezinye izinketho ezise- Broadwater namaphethelo